Soo-saareyaasha Half-Weerare - Shiinaha Shirkadaha Kala-Sooca Beeraha & Warshadaha
Nooca CHECKEDOUT Shayga Shayga U3061D037049U Cabbirka KOOBKA Erayada muhiimka ah chef half apron, canvarder canvas, shiraaca shiraaca Carshiga 85/15 poly / cudbida tolida Xarka polyester sidoo kale waxaa loo yaqaannaa thread xoog-sareeya. Badanaa waxaa loo yaqaanaa (bead light). Kaas oo ah mid u adkeysi badan, jajaban hoose, iyo deganaansho kiimikaad oo wanaagsan. Sababtoo ah itaalkeeda sare, iska caabin fiican, ciribtir hooseeya, hygroscopicity wanaagsan iyo iska caabin kulul, polyester yarn waa iska caabinta u adkaysata, u adkaysashada caaryada, ...
Dharka cad ee cad ee 'poly poly' oo cad cad oo leh hal jeeb U306S0200A
Nooca CHECKEDOUT Shayga Qodobka U306S0200A Cabbirka KOOX SIINE Erayada furaha ah ee jeebka ku jira, waardiyaha wajiga, garka dhexda madow, tufaax yar nus 65/35 poly / suuf GSM.235g Xinjiang Aksu suuf dheer-dhejis ah, bilaa biya-shubis ah, aan-ruxin, lahayn kaar-gooye , nolosha adeegga waa 2 jeer sida jaakad qafis caadi ah. Dunta tolida polyester-ka ayaa sidoo kale loo yaqaan 'thread thread xoog-sare'. Badanaa waxaa loo yaqaanaa (bead light). Kaas oo ah mid u adkeysi badan, jajaban hoose, iyo deganaansho kiimikaad oo wanaagsan. Awooddeeda sare awgeed, oo wanaagsan ...
Midab Dhab ah oo Caan Daran oo Wareeg Dheer Dheer ah leh oo leh Hal jeeb U306S0100A
Nooca CHECKEDOUT Shayga Qodobka U306S0100A Cabbirka KOOX SIINE Erayada furaha ah ee jeebka ku jira, waardiyaha waardiyaha, dhegaha madow ee wajiga / dharka 65/35 poly / suufka GSM.235g Xinjiang Aksu cudud dhaadheer oo dhaadheer, bilaa biya-shubis ah, aan-ruxin, lahayn kansar, nolosha adeega 2 jeer waa jaakad qafiif ah oo caadi ah. Dunta tolida polyester-ka ayaa sidoo kale loo yaqaan 'thread thread xoog-sare'. Badanaa waxaa loo yaqaanaa (bead light). Kaas oo ah mid u adkeysi badan, jajaban hoose, iyo deganaansho kiimikaad oo wanaagsan. Awooddeeda sare awgeed, baabi'in wanaagsan ...
Dharka cad ee dhejiska cad ee 'Poly' oo cad cad oo leh hal jeeb iyo halbeega U302S0100A-1
Nooca CHECKEDOUT Shayga Shayga U302S0100A-1 Cabirka KALKA KHUDBADA ereyada furaha ah, biinanka dhegaha, dheel dheel nal 65/35 poly / suuf GSM.235g Xinjiang Aksu suuf dhaadheer dhaadheer, aan wax cabbin, wax cirib tirneyn, lahayn kansar, nolosha adeegga waa 2 jeer sida jaakad qafis caadi ah. Dunta tolida polyester-ka ayaa sidoo kale loo yaqaan 'thread thread xoog-sare'. Badanaa waxaa loo yaqaanaa (bead light). Kaas oo ah mid u adkeysi badan, jajaban hoose, iyo deganaansho kiimikaad oo wanaagsan. Awooddeeda sare awgeed, soo afjaridda wanaagsan ...
Dharka cad ee cad ee 'poly poly' oo leh dhejis dheelitir leh oo leh hal jeeb ah iyo jaleec ah U302S0100A-1
Nooca CHECKEDOUT Shayga Qodobka U302S0100A-1 Cabirka KHARASH SIILAAN AH ereyada furaha ah, waardiyaha dhegaha, dharka madow ee wajiga / dharka 65/35 poly / suufka GSM.235g Xinjiang Aksu suuf dhaadheer oo dhaadheer, bilaa biya-shubis ah, is-ruxin, lahayn kansar, nolosha adeega 2 jeer waa jaakad qafiif ah oo caadi ah. Dunta tolida polyester-ka ayaa sidoo kale loo yaqaan 'thread thread xoog-sare'. Badanaa waxaa loo yaqaanaa (bead light). Kaas oo ah mid u adkeysi badan, jajaban hoose, iyo deganaansho kiimikaad oo wanaagsan. Awooddeeda sare awgeed, iska caabin-joojinta wanaagsan, ...
Midab Grey midab leh oo jilicsan Wareeg Dheer Dheer ah oo U302S0500A
Nooca CHECKEDOUT Shayga Qodobka U302S0500A Cabbirka KALKA KOOXDA Erayada furaha ah, waardiyaha waardiyaha, dharka dhegaha madow 65/35 poly / suufka GSM.235g Xinjiang Aksu cudud dhaadheer oo dhaadheer, bilaa biya-shubis ah, is-dhimin, lahayn kansar, nolosha adeega waa 2 jeer sida jaakad qafiif ah oo joogto ah. Dunta tolida polyester-ka ayaa sidoo kale loo yaqaan 'thread thread xoog-sare'. Badanaa waxaa loo yaqaanaa (bead light). Kaas oo ah mid u adkeysi badan, jajaban hoose, iyo deganaansho kiimikaad oo wanaagsan. Awooddeeda sare awgeed, iska caabin-la'aanta wanaagsan, ...